नेप्सेमा झिनो सुधार – Nepali Digital Newspaper
सब-स्टेशनबाट विद्युत सेवा सुचारु
कर्जा चाहिएको छ ? ‘सापटी सेवा’लाई सम्झनुस्
घटना र विचार, न्युज डेस्क !6days ago September 14, 2020
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक सोमबार (२९ भदौ) झिने अङ्कले वृद्धि भएको छ । कारोबार प्रणालीमा समस्या आउँदासमेत दोहोरो अङ्कले उकालो लागिरहेको नेप्से परिसूचक आज भने थामिएको हो ।
कारोबार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये सात उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ भने पाँच उपसमूहको शेयर बढेको छ । बैंकिङ १४.६८, विकास बैंक २०।९८, जलविद्युत् १२।२, वित्त ६.९४ र सामूहिक लगानी कोष ०।०४ बिन्दुले बढेको छ । कारोबारका आधारमा आज पनि नेपाल पुनरबीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु २० करोड ४३ लाख आठ हजार ६६८ बराबरको कारोबार भयो । नेपाल बैंक लिमिटेड रु १२ करोड ८४ लाख ४० हजार १६५, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रु १२ करोड ५१ लाख ६७ हजार ५६०, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी रु ११ करोड ३४ लाख ६८ हजार २२७ र सूर्या लाइफ इन्स्योन्स कम्पनी रु आठ करोड २४ लाख ८५ हजार बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।